Andro voalohany amin'ny fampisehoana fampisehoana haza lambo sy Saudi Arabia: mpitsidika maherin'ny 70,000
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Andro voalohany amin'ny fampisehoana fampisehoana haza lambo sy Saudi Arabia: mpitsidika maherin'ny 70,000
Ny fampirantiana Falcon Saudi sy Hunting Exhibition faha-2, izay nisokatra tao Riyadh ny zoma, dia nahazo mpitsidika maherin'ny 70,000 tamin'ny andro voalohany.
Ny andro voalohany dia nanatri-maso ihany koa ny varotra falcon nihoatra ny SR 2 tapitrisa tamin'ny alàlan'ny varotra mivantana tao amin'ilay faritra ho an'ireo mpampiroborobo falcon sy lavanty izay nampisehoana 12 falcon an'ny karazany samihafa.
Ny fampirantiana mandritra ny dimy andro, karakarain'ny Saudi Falcons Club, dia nahazo valiny lehibe avy amin'ireo mpiompy falcon sy mpankafy falconry erak'izao tontolo izao. Ireo mpitsidika vehivavy koa dia nitangorona teo amin'ny toerana fampirantiana teo amin'ny Front Riyadh.
Ity no hetsika lehibe indrindra amin'ny Golfa sy Moyen Orient.
Ny fampirantiana amin'ity taona ity dia misy hetsika miavaka, sehatra samihafa ary hetsika maromaro, hoy ny Saudi Falcons Club.
Ny fampirantiana dia mandrakotra velarantany 36,000 metatra toradroa ary misy ny fanatrehan'ny solontena avy amin'ny firenena 20 mahery, ny fandraisana anjaran'ny mpampiranty 350, ary ny sampana manokana miisa 30.
Ny fampirantiana dia misy fizarana ho an'ny fampiratiana falcon, fampisehoana fiara novaina, zavakanto plastika, fitifirana zana-tsipika, studio sary, lavanty falcon, sns.
Hetsika ara-kolontsaina sy kolontsaina maro no hatao eo anilan'ny fampirantiana.
Miaraka amin'ity fampirantiana ity, Arabia Saodita, izay ao amin'ny lisitry ny firenena mikotroka falcon ny UNESCO, dia mikendry ny hanazava ny besinimaro momba ny vakoky ny Fanjakana ary hampianatra ireo taranaka ho avy momba ny falconry ary koa ny momba ny fihazana falcon sy ny fialamboly fiompiana.
Ny fampirantiana izay ampahany amin'ny hetsika Riyadh Season dia misokatra manomboka amin'ny mitataovovonana ka hatramin'ny misasakalina.
Ny fampisehoana Saudi Falcons sy Hunting voalohany tamin'ny taon-dasa dia fahombiazana lehibe.
Raha te-hamaky vaovao momba ny dia momba an'i Saudi Arabia Eto.